I Somme dia departemanta frantsay ao amin'ny faritra Picardie, faritra any avaratry ny departemantan'i Oise. Ny renirano Somme no iavian'ny anaran'ilay departemanta mitovy anarana. Ny kaodin'ny departemantan'i Somme dia 80 ho an'ny la Poste ary ho an'ny Insee. Ao Somme koa no ahitana ireo anaran-tanàna fohy indrindra ary lava indrindra ao Frantsa : Y ary Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly.
Fisian'ny departemantan'i Somme (miloko mena)
Noforonina taorian'ny Tolom-piavotana frantsay, tamin'ny 4 Martsa 1790 io departemanta io, noho ny fampiharana ny lalàn'ny 22 Desambra 1789 avy amin'ny singa avaratry ny faritanin'i Picardie (ny Amiénois, ny Marquenterre, i Ponthieu, i Santerre ary i Vimeu).
Ny deoartemanta ankehitirny, afovoany ara-tantaran'i Picardie, dia tadiavina hananana noho ny fisiany eo anelanelan'i Paris sy ny Valandera. Toerana nisian'ny ady maro dia maro ny departemantan'i Somme, nandritry ny adin'i Galia, Adin'ny zato taona, adim-pinoana, adin'ny taona 1870, Ady lehibe voalohany ary ady lehibe faharoa.
Tamin'ny Ady lehibe voalohany, nanomboka tamin'ny 1916 ny adin'i Somme.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Somme&oldid=911484"
Dernière modification le 24 Oktobra 2018, à 13:37
Voaova farany tamin'ny 24 Oktobra 2018 amin'ny 13:37 ity pejy ity.